Nabadoon C/llaahi Geedi Shadoor oo Nabad Sugiddu ka reebtay diyaarad – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Nabadoon C/laahi Geeddi Shadoor oo horayna uga mid ahaa baarlamaankii KMG ahaa ee Soomaaliya ayaa maanta ciidamada Nabadsuigdda Soomaaliya ka reebeen diyaarad, isagoo kusii jeeday degmada Dhuusamreebn ee gobolka Galgaduud.
C/llaahi Geeddi oo u warramay VOA ayaa sheegay in markii diyaaraddu duuli rabtay ay u yimaadeen askar dhar cad ah, islamarkaana geeyeen saldhiga Nabad Sugiddu ku leedahay Gaaroonka, kana reebeen diyaaraddii uu la socday.
Wuxuu sheegay in muddo su’aalo la weydiiyey kadib loo sheegay inuu fasaxan yahay balse waqtigaasi ahaa goor ay iska baxday diyaaraddii uu raaci rabay.
Nabadoonka ayaa sheegay inuu u socday ka qeybgalka Shir Nabadeed oo ay beelaha gobollada Dhexe ku leeyihiin degmada Dhuusamreeb, hase ahaatee laga hor istaagay, boorsadiisiina diyaaraddu la tagtay.
“Saaka anigoo u socda Dhuusamareeb oo uu ka dhacayo shir lagu heshiisiinayo beelaha dhisanaya maamulka gobollada Dhexe ayaa ciidamo dharcad ah diyaaradda iga soo dejiyeen, su’aalo ayayna i weydiiyeen, diyaaradiina wey iga tagtay, kadibna wey iska fasaxeen” ayuu C/laahi Geedi Shadoor.
Wuxuu sheegay in la weydiiyey halka uu socda iyo sababaha uu u aadayo Dhuusamareeb, uuna u sheegay inuu u socdo shir Nabadeyn ah oo halkaas ka dhacaya.
Nabadoonka ayaa xusay inuu u maleynayo in sababta diyaaradda looga reebay tahay khilaaf u dhaxeeya beelaha dega gobollada Dhexe oo dadka kasoo wada jeeda u kala jabeen labo saf oo qolo kusii socoto Cadaado qolo kalana kusii socoto Dhuusamreeb.
“Waxaa jirta in dadka gobollada Dhexe labo saf kala noqdeen qolo Cadaado ayay aadeen oo waxey leeyihiin maamulka ayaan dhiseynaa, qolo kalana waxey yiraahdeen inta aanan wax dhisan aan marka hore heshiino, Dhuusamreebna aan ku shirno, markana waxaa filaa in meeshaas leyga heysto” ayuu C/llaahi Geedi Shadoor.
“Falka leygula kacay waa mid abuuri kara clool xumo, maxaa yeelay dadkii ku nool Ceeldheere, Galcad iyo Xarardheere waxey shirka kasoo aadi waayeen Alshabaab, marka haddii annaguna aan halkaan ka bixi weynay waa wax kale” ayuu Nabadoo C/llaahi oo xusay inuu doonayo inuu berri aado Dhuusamreeb.
Dadka kasoo jeeda beelaha gobollada Galgaduud iyo Mudug ayaa kala jab ku dhacay, waxaana laga abaabulayey Dhuusamreeb iyo Cadaado shirar ay kala hogaamniyaan dhinacyo iska soo horjeeda.
Muungaab oo xariga ka jaray dhismaha wadada 2-aad ee Suuqa Bakaaraha